Inuu bilihii lasoo dhaafay xiriir la sameynayay Real Madrid, kusoo laabashadiisa Bernabeu iyo xan walba oo ku saabsan dib u midowga Ronaldo iyo Los Blancos - Wardeeq 24 TV Inuu bilihii lasoo dhaafay xiriir la sameynayay Real Madrid, kusoo laabashadiisa Bernabeu iyo xan walba oo ku saabsan dib u midowga Ronaldo iyo Los Blancos Wardeeq 24 TV
Home Sports-ka Inuu bilihii lasoo dhaafay xiriir la sameynayay Real Madrid, kusoo laabashadiisa Bernabeu...
Inuu bilihii lasoo dhaafay xiriir la sameynayay Real Madrid, kusoo laabashadiisa Bernabeu iyo xan walba oo ku saabsan dib u midowga Ronaldo iyo Los Blancos
Wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa sheegaya in Cristiano Ronaldo uu doonayo kusoo laabashada Real Madrid xagaagan isagana huleeli doono naadiga Juventus.
Bianconeri ayaa sanadkii 2018 Los Blancos kaga soo qaadatay Ronaldo qiimo lacageed dhan 88 milyan oo gini, iyadoo rajada ugu weyn ee kooxda Taliyaanig ah ay ahayd inuu xiddigan u sahlo hanashada tartanka Champions League.
Hase ahaatee, markii ay FC Porto toddobaadkii lasoo dhaafay Juventus ka reebtay tartanka horyaallada Yurub, waxay Juve ku baraarugtay inaysan rubac dhammaadka tartankan gaari weysey xilli ciyaareedkii labaad oo xiriir ah, halka sanad ciyaareedkii ka horreeyayna ay waji gabax kala kulantay Ajax wareegga rubac dhammaadka.
Iyadoo ay hal sano ka harsan tahay heshiiska uu Ronaldo ku joogo Turin, jariiradda Isbaanishka ah ee AS ayaa sheegeysa in kabtanka Portugal uu doonayo kusoo laabashada naadiga Real Madrid, waxaana ay intaas ku dartay in bilihii la soo dhaafay ay wada xiriiriyeen laacibkan iyo kooxdiisii hore.
Juventus ayaa docda kale ka eegeysa iibinta xiddigan maadaama uu mushahar ahaan kaga qaato 28 milyan oo gini sanadkiiba, taasoo dardar gelineysa inay xagaagan iska iibiso.
Marca ayaa sidoo kale warineysa in Real Madrid ay xantan run u rogeyso iydoo ku riyoonaysa inay Ronaldo kusoo celiso caasimadda Spain ee Madrid.
Si kastaba ha ahaatee, wararkan ka imaanaya dalka Spain ayaa kusoo beegmaya xilli ay dhowaan jariiradda Corriere dello Sport ee dalka Taliyaaniga kasoo baxda ay warisay in kooxda ku ciyaarta Allianz Stadium ay ku iibineyso Ronaldo ugu yaraan 25 milyan oo gini maadaama lacag intaas ka hooseysa haddii ay ku iibiso khasaaro ku noqoneyso.
Cristiano Ronaldo oo shan jeer ku guuleystay biladda laacibka dunida ugu wanaagsan ee Ballon d’Or ayaa sagaal sano kusoo qaatay garoonka Santiago Bernabeu Stadium isagoo kooxda Cad Cadka kula guuleystay afar jeer tartanka Champions League sidoo kalena waxa uu u dhaliyay 450 gool kaddib 438 kulan oo uu u ciyaaray naadiga difaacaneysa horyaalka La Liga.
Previous articleSergio Aguero oo ka jawaabay wararka xanta ah ee la xiriirinaya Kooxda Barcelona
Next articleShaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Leeds United iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey